UParker yibhere efundisa abantwana besebenzisa i-ARKit | IPhone iindaba
I-teddy bear yabantwana ehambelana ne-Apple's ARKit kwaye iya kuba nomdla kubantwana abancinci ekhaya ukuba bafunde. Inikwa ngolu hlobo ke "into yokudlala" entsha. Baqala ukuthengisa kwezinye iivenkile zeApple abafana abavela eCupertino.
Yinto yokudlala efakiweyo ethi, ngaphandle kokuba nezinto zecomputer ngaphakathi, inike umntwana indlela emangazayo yokunxibelelana nayo. Ngokuqinisekileyo iya kunceda abantwana abancinci ulinge ngale nto inyanzelisiweyo usebenzisa izixhobo ze-iOS.
Nguwo i vidiyo apho ungabona khona inxenye yokusebenza kwayo nge-iPad njenge-protagonist:
Njengoko ubona kule ntengiso basibonisa amathuba abawanikeza abantwana ukuba babakhathalele, babafundise kwaye babe noxanduva. Abantwana baya kuthanda thatha i-X-ray yebhere, thabatha iqondo lobushushu ukujonga umkhuhlane okanye yondle.
Parker, iyafumaneka ukuze ithengwe ngezixhobo ezahlukeneyo zokuyisebenzisa njengononophelo «izixhobo», sibona ithemometha, ukhilimu kunye nezinye izinto ezifanayo ezinceda ukusebenzisana komntwana nebhere. Njengoko abantwana bekhula, inkqubela phambili iyenziwa kukhathalelo lwezilwanyana ezifakiweyo kwaye ziya kunika imingeni emitsha, ukuzilolonga okanye iipuzzle ezahlukeneyo ukukhuthaza izakhono zabantwana.
Inye kuphela "ingxaki" kule meko kukuba iParker plush iyafumaneka ukuba ithengwe kwezinye iiVenkile zeApple ezikhethwe yinkampani kunye nakwiVenkile yeApple ekwi-Intanethi kwelo lizwe linye, zonke ngokucacileyo eMelika, nangona izixhobo ezifanayo ngakumbi kulindeleke ukuba zifike kwakamsinya kwezinye iivenkile isasazeke kwihlabathi lonke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » UParker yibhere yeeddy efundisa abantwana usebenzisa iARKit
IPodcast 9x05: Ukusombulula ingxaki